အနာဂါတ်ရဲ့မရှိမဖြစ် ecormmerce Business : A Creative Digital Agency - Digital Dots
အနာဂါတ်ရဲ့မရှိမဖြစ် ecormmerce Business
​နေ့စဥ်နဲ့အမျှ ကျွန်​တော်တို့အားလုံးက Internet ကိုအသုံးပြုပြီးပြီး အလုပ်​တွေ လုပ်ကြတယ် ၊ လိုချင်တာ​တွေ ရှာ​​ဖွေဝယ်ယူကြတယ် ၊ နည်းပညာ​စတာ​တွေကိုအလွယ်တကူ​လေ့လာ​နေကြပါတယ်…
ဒီလိုပါပဲ စီးပွား​ရေးနဲ့ လူမှုလုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်း​တွေကလည်း Internet နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Social Network​တွေ​ပေါ်မှာ ​​​ခြေစုံပစ်ဝင်လာပြီး လုပ်ငန်း​တွေကို ပိုမိုတွင်ကျယ်ဖို့အတွက် လုပ်​ဆောင်​နေကြပါပြီ…
ဒါ​ကြောင့် e-commerce က ကျွန်​တော်တို့​နေ့စဥ်ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် အ​ရေးပါတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်​နေပါတယ်။
ဒီအချက်​တွေ​ကြောင့် E-commerce ကဘာလို့အ​ရေးကြီးလည်း ဆိုတာ ပိုသိသာလာရပါတယ်။
၁) ကုန်ပစ္စည်း​ရွေးချယ်ရာတွင် လွယ်ကူခြင်း
Tradition Business ​တွေက ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ​ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဓိကက​တော့ ကုန်ပစ္စည်း​ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှု​ကြောင့်ပါပဲ။ Traditional Business လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဥပမာ ​ပေးပြီး​ပြောပြချင်ပါတယ်…
ဥပမာ ဖိနပ်တစ်ရံ ဝယ်ယူဖို့အတွက် ​ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားတယ်ဆိုရင် အဲဒီဆိုင်မှာ ကျန်​နေတဲ့ ဖိနပ်အ​ရောင် နဲ့ size ​​တွေကိုပဲဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်ပြီး လိုက်လံ ဝယ်ယူဖို့အတွက်က အရမ်းကို ခက်ခဲပင်ပန်းပြီး အချိန်​တွေလည်းကုန်ဆုံး​စေပါတယ်။
Social Media မှာဆို​ရင်​တော့ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ​စျေးဆိုင် ၅ဆိုင်​လောက်အထိ ရှာ​ဖွေ​မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ Design , Size , Color ​တွေကိုအလွယ်တကူ​​ရွေးချယ်ပြီး ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ Traditional ဘက်မှာဆိုရင်​တော့ ဒီလိုဝယ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက် တစ်​နေကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်​က Ecommerce ဘာလို့ပိုပြီးအ​ရေးကြီးလညွးဆိုတာ သိသာ​စေပါတယ်။
၂) ငွေ​ကျေးကုန်ကျမှု သက်သာခြင်း
ထုတ်ကုန် နှင့် ဝန်​ဆောင်မှုများကို Online က​နေ​ရောင်းချခြင်းသည် Traditional နည်း​လမ်း​တွေထက် ကုန်ကျမှုကို ​လျော့​စေပါတယ်။
Offline Commerce မှာ​ဆော့ ကုန်ကျစရိတ်​တွေက​တော်​​တော်များပါတယ်…store management cost, counter cost, inventory cost, security cost, transportation cost, Shop rent, Salary စတာ​တွေကုန်ကျ​စေပါတယ်…
ဒါ​ကြောင့် Retailer ​တွေက ကုန်ပစ္စည်း​တွေကို ​စျေးခိပြီးမ​ရောင်းနိုင်တဲ့အတွက် Online Shopping ​တွေက ခနခန ​စျေး​လျော့​ရောင်းပြီး ဝယ်ယူသူကိုပိုဆွဲ​ဆောင်​စေ နိုင်ပါတယ်…
ဥပမာ Desiger သင်တန်းတစ်ခုတက်မယ်ဆိုရင် အချိန်အနည်းဆုံး ၃ လက​နေ ၆လအထိ ကြာြပီး တစ်ရက်ကို ၂ နာရီက​နေ ၃ နာရီအထိ သင်တန်းကိုသွား​နေရပါတယ်။ ဒါ​တွေက တကယ်​တော့ လူကို အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းဖြစ်​စေပါတယ်။
ဒါ​​ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ Online Diploma သင်တန်း​တွေက ပိုပြီး လူကြိုက်များလာပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာသင်တန်းကို လွယ်လွယ်ကူကူ ​ရွေးချယ်ပြီး တက်​ရောက်လ်ု့ရတဲ့အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာ​စေပြီးအချိန်မ​ရွေး​လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Data Record ​တွေကလည်း Online Course ​တွေဖြစ်တာ​ကြောင့်အချိန်မ​ရွေးပြန်လည်​လေ့လာနိုင်ပါတယ်…ဒါ​ကြောင့် ဒီ​နေ့​ခေတ်မှာ​​တော့ Online ပညာသင်ကြား​ရေးစနစ် ဒါမမဟုတ် E Commerce သင်ကြား​​ရေးစနစ်က ပိုပြီး အ​ရေးပါလာခဲ့ပါတယ်…
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများဟာ Traditional Marketing (Offline Marketing) ဘက်ကိုကျော်လွန်ပြီး Social Media Marketing ဘက်ကို တဟုန်ထိုး ဖြန့်ကျက်လာကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြေကရှင်းပါတယ်…
Social Media မှာဆိုရင်တော့ တိကျတဲ့ Target နေရာ၊ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားမရွေး ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လုပ်ငန်း ကြော်ငြာတွေကို အားလုံးသိအောင် ကုန်ကျမှုသက်သာစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်လို့ရလို့ပါပဲ…
ကြော်ငြာပြီးသွားရင်လည်း ကိုယ့်ကြော်ငြာကို ဘယ်လောက်မြင်တယ် ဘယ်အသက်အရွယ် ဘယ်ဒေသ စတာတွေကို Social Media က Data Record နှင့်တကွ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်လို့ပါ…
Traditional မှာတော့ Data တွေကိုကြည့်လို့မရနိုင်တဲ့အပြင် ထိရောက်တဲ့ target မရှိမှုသာမက Marketing Budget ကလည်း တော်တော်လေးကို အကုန်အကျများပါတယ်….
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း E Commerce အခြေခံတဲ့ Business တွေဖြေစ်အာင် အမြန်ဆုံးကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်
ပြိုင်ဖက်ထက်နှာတစ်ဖြားသာဖို့ ဒါမမဟုတ် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ယခုထက်ပိုအောင်မြင်ခြင်တယ်ဆိုရင်တော Digital Dots ကနေပြီးတော့ အကောင်းဆုံး Markeitng Planတွေနဲ့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်..
Special days in Myanmar 2020
Pet Shop Myanmar Social Media Designs
© Digital Dots 2020. All Rights Reserved.